के क्षयरोगका बिरामीले यौन सम्पर्क राख्न सुरक्षित हुन्छ? – Health Post Nepal
२०७८ कार्तिक २२ गते १७:२७
प्रश्नः म ३२ वर्षको एक विवाहित महिला हुँ। मेरो विवाह भएको पाँच वर्ष भयो। मेरो श्रीमान् यौन सम्पर्क राख्न धेरै रुचाउनुहुन्छ। जुन दिन उहाँको अफिस विदा हुन्छ, त्यो दिन तीनचार पटक यौन सम्पर्क राख्छौं। उनलाई ट्युबरक्लोसिस (टीबी) भएको छ, जसले गर्दा सेक्स गर्न कम भएको छ। यस्तो समयमा पनि सेक्स गर्न सुरक्षित छ कि छैन जिज्ञासा लागेको छ। के यसले मलाई कुनै यौन रोग हुन सक्छ कि सक्दैन?
जवाफः क्षयरोगको उपचारको क्रममा सेक्स गर्न वा नगर्न कुनै रोकतोक छैन भने यसमा कुनै खतरा पनि छैन। क्षयरोगले यौन क्रियाकलापले फैलिदैंन भने यौन संक्रमणका कारण हुने रोग पनि होइन। चुम्बन तथा यौन सम्पर्क राख्दा यो रोग हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदैन। सँगै खाँदा, यौन सम्पर्क राख्दा, छुँदा यो रोग फैलिदैंन। कतिपय समयमा सेक्स गर्दा मानसिक तनाव कम हुने गर्दछ। यदि बिरामी यौन चाहन्छ र उनको शरीरले सेक्स गर्न साथ दिन्छ र पार्टनर पनि राजी भए यो फाइदामन हुनसक्छ। यसमा नोक्सान हुँदैन।
आफ्नो पनि उपचार गराउनु
चिकित्सकहरुका अनुसार यदि आफू विरामीको नजिकको सम्पर्कमा रहे अनिवार्य जचाउँनुपर्छ। आफूमा पनि यो संक्रमण भएको हुन सक्छ। क्षयरोगको किटाणु फोक्सोबाट साँसहुँदै अन्य व्यक्तिमा फैलिन्छ। त्यसैले तपाईंले पनि आफ्नो परीक्षण गराउन जरुरी छ।
डा. चारु पन्तको सल्लाह